मेमोरी किङ - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
एक यस्ता विद्यार्थी जो कहिल्यै कलेज जाँदैनन्, कक्षा लिँदैनन्, ट्युसन पढ्दैनन् तर, पनि सधैं फस्ट हुन्छन् । अझ रोचक त के भने उनी केही घण्टा वा केही दिन पढेकै भरमा परीक्षामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्छन् । शैक्षिक सत्रभरि कलेज धाउने, नछुटाई लेक्चर सुन्ने, ट्युसन पढ्ने र कहिल्यै कक्षा लिन मिस नगर्दासमेत पास हुन धौ—धौ पर्ने कमजोर स्मरणशक्ति भएको हाम्रो जेनरेसनका लागि एउटा तन्नेरीको यो विलक्षण प्रतिभा साँच्चै चकित पार्ने खालको छ । आखिर कसरी ? ‘यो सबै टेक्निक, खानपान र व्यायामको कमाल हो । यसलाई म छुट्टै विलक्षण प्रतिभा मान्दिनँ’ गिनिज बुक रेकर्डधारी झापा, भद्रपुरका अर्पण शर्मा कट्टेलले गत सोमबार साँझ साप्ताहिकसँगको भलाकुसारीमा भने । झापाको मेची बहुमुखी क्याम्पसमा एमबीएस पहिलो वर्ष अध्ययनरत यी तन्नेरी युवाको तेज स्मरणशक्ति कमालकै छ ।
त्यसैले त संसारकै तेज स्मरणशक्ति भएका व्यक्तिका रूपमा उनको नाम गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डसमा समावेश छ । २६ सेप्टेम्बर सन् २०१५ मा उनले एक मिनेटमा ४२ वटा वस्तु चिनेर तेज स्मरणशक्ति भएका व्यक्तिका रूपमा गिनिज रेकर्डमा आफ्नो नाममा लेखाएका हुन् । त्यसअघि उक्त रेकर्ड भारतका जयसिम्हा रभिरालाको नाममा थियो, जसले १ मिनेटमा ४० वटा वस्तु सम्झेर उक्त रेकर्ड बनाएका थिए ।
अर्पण एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि कहिल्यै कलेजका गएका छैनन् तै पनि उनी कलेज टपर हुन् । ‘स्कुल पछि म कहिल्यै कलेज गइनँ । कलेजको क्लास कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पनि छैन,’ २७ वर्षीय अर्पणले भने, ‘एक महिना पढ्छु तर एक महिना पढेकै भरमा कलेज टप गर्छु– जस्ट वान मन्थ ।’ रुटिन आइसकेपछि पुस्तक किन्ने बानी भएका अर्पण पुस्तकलाई बुझ्छन् र आफ्नो दिमागमा फिल्म बनाउँछन् । यही शैलीले उनलाई परीक्षामा जहिल्यै फस्ट बनाउँछ ।
अर्को आश्यर्चलाग्दो पक्ष के छ भने उनलाई अहिलेसम्म कलेजका कोर्स बुकहरू बुझाइदिन शिक्षकको आवश्यकता परेको छैन । ‘उहाँ प्राय: कलेज आउनुहुन्न्, भर्ना गर्न, एक्जाम फर्म भर्न र परीक्षाका बेला मात्र भेट हुन्छ,’ अर्पणकी सहपाठी निता दंगाल न्यौपाने भन्छिन्, ‘तर, पनि उहाँ हाम्रो ब्याचको टपर हो, उहाँको स्मरणशक्ति गजबकै छ ।’
उनका सहपाठीहरू मात्र होइनन्, उनका लेक्चररहरू पनि अर्पणमा अद्वितीय प्रतिभा भएको बताउँछन् । ‘उनी राष्ट्रिय प्रतिभा हुन्, उनको स्मरणशक्ति विलक्षण छ,’ उनी अध्ययनरत झापा बहुमुखी क्याम्पसका ह्युम्यान रिसोर्स म्यानेजमेण्टका लेक्चरर अरुण भट्टराईले साप्ताहिकसँगको कुराकानीमा भने, ‘उनी हाम्रो क्याम्पसका टपर हुन् । उनले स्कुल–कलेजमा आफ्नो प्रतिभा देखाइरहेका छन् ।’अर्पणले विद्यालय शिक्षा हासिल गरेको एसएस निकेतनका सहायक प्रधानाध्यापक सोम श्रेष्ठ उनी बहुप्रतिभाशाली विद्यार्थी भएको बताउँछन् । ‘एउटै शब्दमा भन्दा अर्पण बहुप्रतिभाशाली विद्यार्थी हुन् । उनको तेज स्मरणशक्ति आश्चर्यलाग्दो नै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सानैदेखि उनी क्लासमा पढाउने विषयहरूको एकदम राम्रो पूर्वतयारी गर्थे । गाह्रा—गाह्रा शब्दहरू खोजी त्यसको बहुअर्थ खोज्न पनि निकै समय बिताउँथे ।’ श्रेष्ठका अनुसार अरू सबै विद्यार्थीको तुलनामा अर्पण एकदमै भिन्न थिए ।
योग, मेडिटेसन र टेक्निक नै तेज स्मरणशक्तिको मुख्य सूत्र भएको बताउने अर्पण गीत गाउँदा–गाउँदै धेरै कुरा कण्ठस्थ पार्न सक्छन् । कसरी ? ‘म राइट र लेफ्ट ब्रेन एकसाथ चलाउन सक्छु,’ उनले भने, ‘राइट ब्रेनले म मेमोराइज गर्ने कुरा मेमोराइज गर्छु, लेफ्टले गीत गाइरहेको हुन्छु ।’ कुनै प्ुस्तक याद गर्ने र गीत गाउने दुवै काम एकै समयमा गर्न सक्ने खुबी छ उनमा । ३०/४० वटा शब्द एउटा कापीमा लेखेर दियो भने उनी १ मिनेटमै त्यसलाई पढेर कति नम्बरमा के छ भन्न सक्छन् । यही खुबी र विशेष क्षमताकै कारण अर्पण अब पानीमुनि गएर दुई डेग तास (१०४ वटा पत्ती) याद गरेर फरक र नौलो रेकर्ड बनाउन चाहन्छन् ।
एक मिनेटमा ४०/४५ वटा कुरा गीत गाएर मेमोराइज गर्न सक्ने खुबी पनि उनमा छ । अर्पण टायरमा उल्टो लटकिएर गीत गाउँदै मेमोराइज गर्ने भिन्न रेकर्डका लागि पनि तयारी गरिरहेका छन् । ‘अब रेकर्डका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाउँछु,’ अर्पणले भने, ‘म यी सबै काम सजिलै गर्न सक्छु ।’ पानीभित्र १ सय ४ वटा पत्तीलाई क्रमबद्ध रूपमा आफूले मेमोराइज गर्ने बताउँदै उनले यो रेकर्डका लागि आफू उत्साहित रहेको समेत बताए । ‘यो फरक र भिन्न रेकर्ड हुनेछ । म पानीमा पसेपछि एक जनाले दुई जोर तास मलाई दिनेछन् । पानीभित्र दुई/तीन मिनेट श्वास रोकेर म त्यसलाई याद गर्नेछु र बाहिर आएर १ नम्बरमा यो थियो २ नम्बरमा यो थियो र २३–२६–३०–६०–९० आदि नम्बरमा यो पत्ती थियो भनेर कन्ठस्थ सुनाउनेछु ।’ उनले पानी बाहिर अहिले यसको रिहर्सलसमेत गरिसकेका छन् ।
दिमागले शब्द बुझ्दैन !
अर्पणको स्मरण गर्ने आफ्नै छुट्टै शैली छ । कक्षा ७ मा पढाइमा हेल्चेक्रयाइँ गरेपछि बुवाआमाको खप्की खाएका थिए, उनले । त्यसयता अर्पणले स्मरण गर्ने आफ्नो खुबीलाई धार दिए । त्यही धारले उनलाई विश्व रेकर्डधारी मात्र बनाएन, उनको चर्चा पनि चुलियो । तेज स्मरणको त्यस्तो सुत्र के हो ? ‘दिमागले फोटोलाई फ्लो गर्छ । हाम्रो दिमागको बेसिक फर्मेट भनेको फोटो हो तर हामी शब्दलाई याद गर्छौं,’ अर्पण भन्छन्, ‘तर, हामीले ती शब्दलाई फोटोमा रूपान्तरण गर्ने हो भने सजिलै त्यो कुरा स्मरणमा रहन्छ ।’
अर्पणका अनुसार सपनामा फोटो र भिडियोमा मात्र देखिनुको कारण पनि यही हो । ‘कहिल्यै पनि कसैले गणितको फर्मूला र शब्दमा सपना देखेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले माइण्डको बेसिक फम्र्याट भनेको चित्र वा फोटो हो ।’ अर्पण याद गर्ने कुरालाई यदि चित्रमा परिणत गरियो भने दिमागको ल्याङ्वेजसँग मिल्ने र त्यो कुरा छिट्टै स्मरण हुने तर्क गर्छन् । ब्रेनको फर्मूला फोटो भए पनि शब्दलाई ब्रेनमा हाल्न खोज्ने र त्यो ब्रेनले नबुझ्ने कारण चाँडै विस्मरण हुने उनको दाबी छ ।
तेज स्मरणशक्तिकै कारण अर्पणको फोनमा तारन्तर घण्टी बजिरहन्छन् । ठाउँ—ठाउँबाट मानिसहरू उनलाई सोध्छन्, ‘स्मरणशक्ति बढाउन के गर्नुपर्छ, केही टिप्स दिनुहोस् न ?’ उनी अरूलाई सकेसम्म स्मरणशक्ति बढाउने टेक्निक र टिप्स दिने प्रयास गर्छन् । ‘तर, सबैलाई फोनमै टिप्स दिन सकिँदो रहेनछ । कहिलेकाहीँ त फोनले हैरान नै पार्छ,’ उनले सुनाए । स्मरणशक्ति बढाउने टेक्निक र टिप्स सिकाउनकै लागि उनी देशका विभिन्न ठाउँमा आयोजना गरिने सेमिनारहरूमा दौडिरहेका हुन्छन् ।
अहिले उनी मेमोरी पावर सेमिनारमार्फत सबै जनालाई कसरी छिटो मेमोराइज गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँदै हिँडेका छन् । ‘३ दिने र ७ दिने सेमिनारमा म विद्यार्थीहरूलाई यस्ता—यस्ता ट्रिक दिन्छु, जुन उनीहरूले अप्लाई गरे भने १० घण्टामा पढ्ने कुरा एक घण्टामा पढ्न सक्छन्,’ अर्पण भन्छन् । तेज स्मरण शक्ति र त्यसलाई मासमा प्रसार गर्न सक्ने क्षमता कारण उनले भारतको कालिङपोङ, दार्जिलिङ, झापा, काठमाडौं, धरान आदि धेरै ठाउँमा मेमोरी पावर सेमिनार सम्पन्न गरिसकेका छन् । यसबाहेक डाक्टर, आर्मी तथा प्रहरीका साथै विभिन्न अफिसमा समेत मेमोरी बढाउने कला सिकाइसकेका छन् ।
गत बुधबार मेमोरी पावर सेमिनारका लागि हेटौंडा पुगेका अर्पणको त्यसपछिको कार्यतालिका पनि प्याक छ । हेटौंडापछि झापा तथा काठमाडौंका सेमिनारहरू तय भैसकेका छन् । जापानमा पनि यस्तै कार्यक्रम गर्ने तयारी चलिरहेको छ । जागिर गर्न उनलाई खासै रहर छैन । उनी आफैं केही फरक काम–व्यवसाय गर्न चाहन्छन् ।
अहिले त मेमोरी पावर सेमिनारबाटै उनले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । अर्पण भन्छन्, ‘१ दिनमा १०-१५ हजारबिना त काम गर्दिन । दुई/तीन घण्टा बोलेको १०/१५ हजार लिन्छु ।’ पहिलो दिन डेमो मात्र हुने बताउँदै उनले ३ दिने प्याकेजमा प्रतिव्यक्ति ५ सय र ७ दिने प्याकेजमा प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ लिने गरेको बताए ।
गिनिज बुक रेकर्डको कथा
७ कक्षामा पढ्दाताका अर्पणले पहिलो पटक गिनिज रेकर्डको नाम सुनेका थिए । एकदिन घरको माथिल्लो तलामा उनी आफ्नी आमा तथा दिदीहरूसँगै थिए । भर्खरै गिनीज बुकको नाम सुनेका उनले त्यही क्रममा भनिदिए, ‘म गिनिज बुकमा आफ्नो नाम लेखाउँछु ।’ आमा र दिदीहरू गलल्ल हाँसे । अर्पण आफैं पनि हाँसे ।
त्यतिबेला त्यो केवल ठट्टाको विषय थियो । अर्पण आफैंले पनि कहिल्यै त्यो कुरा यथार्थमा बदलिएला भन्ने सोचेका थिएनन् । सानैदेखि उनी ७/८ घण्टा योगमा बिताउँथे, ३/४ घण्टा मेडिटेसन गर्थे । यो उनको नियमितता थियो । ‘त्यतिबेला मैले जे एक्पीरियन्स गरे, त्यो नर्मल मान्छेलाई भन्यो भने पत्याउँदैनन्,’ अर्पण भन्छन्, ‘योग र मेडिटेसनले यतिधेरै इनर्जी दिन्छ कि त्यतिबेला जे पनि सम्भव हुन्छ ।’ अर्पण योग र मेडिटेसनकै कारण पनि आफ्नो स्मरण शक्ति यति तेज भएको मान्छन् । यसबाहेक उनले आफ्नो खानपिनलाई पनि फरक बनाएका छन् । उनी जंक फुडहरू खाँदैनन्, प्राकृतिक खानेकुराहरू नै उनको रोजाइमा हुन्छन् । यसरी नै आफ्नो ब्रेनलाई फिट राख्दै आएका छन् उनले । त्यसबाहेक उनको रुचि सुपर पावरमा बढी थियो । उनी सुपरम्यान, स्पाइडरम्यानजस्ता फिल्म हेर्थे भने ती सुपर पावरका बारेमा लेखिएका पुस्तकहरू पनि पढ्थे ।
२०७० साल मंसिर महिनाको कुरा हो । बीबीएस दोस्रो वर्षको परीक्षा चलिरहेको थियो । साथीहरूबीच ३० वटा शब्द कसले चाँडो कण्ठ गर्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । अर्पणले १ मिनेटमै ती शब्द स्मरण गरेर सुनाए । साथीहरू चकित भए । उनीहरूले गिनिजमै नाम लेखाउन सक्छस् भनेर उक्साए पनि ।त्यसपछि उनले गिनिज बुकको पेज खोजे । त्यहाँका रेकर्डहरू पल्टाए । आफूले गिनिजबुकको रेकर्ड ब्रेक गर्न सक्छु भन्ने लागेपछि उनले गिनिजलाई प्रोसेसका लागि एप्लिकेसन पठाए । उताबाट अनुमति आयो । अनुमति प्राप्त भैसकेपछि उनले झापाका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा इभेन्टको आयोजना गरे ।
दमकमा एउटा बन्द कोठाभित्र ताला, ब्याट्री, चम्चालगायतका ४२ वटा वस्तु क्रमैसँग राखियो । उनलाई एक मिनेटमा ती वस्तु याद गर्न भनियो । उनले ६० सेकेण्डमा ४२ वटा वस्तु याद गरे । त्यो इभेन्टको भिडियो र फोटो गिनिजको हेडक्वार्टर लण्डन पठाइयो जसलाई अध्ययन गर्न गिनिज बुकको टिमले १३ महिना लगाएको थियो । सबै कुरा पुष्टि भएपछि २६ सेप्टेम्बर २०१५ मा उनको नाम संसारकै सर्वाधिक तेज स्मरणशक्ति भएको व्यक्तिका रूपमा गिनिज वल्र्ड रेकर्ड लेखियो ।
नाम : अर्पण शर्मा कट्टेल
जन्म : २०४६ साल, झापा
आमा बुबा : मोहोन शर्मा कट्टेल, खिना शर्मा कट्टेल
स्कुल : शिशु निकेतन भद्रपुर
प्लस टु : एमरेल्ड एकेडेमी, भद्रपुर
उच्च शिक्षा: मेची बहुमुखी क्याम्पस
दिमाग फिट राख्न अर्पणको टिप्स
बिहान उठ्ने बित्तिकै लामो श्वास फेर्ने, प्राणायाम गर्ने
उठ्ने बित्तिकै कागती पानी पिउने
बदाम तथा ओखर खाने
प्राकृतिक ( अर्गानिक) खाना खाने
याद गर्ने वस्तु तथा अक्षरलाई फोटोमा ढाल्ने
पालुङोको साग एवं घोरताप्रेको झार खाने
एरोविक एक्ससाइज गर्ने (प्राणायाम, रनिङ, जंगिङ, योग, वाकिङ, स्वीमिङ, स्कीपिङ आदि)
आइ रेकी गर्ने ।
१५ मिनेट पढे ५ मिनेट, ३० मिनेट पढे १० मिनेट तथा १ घण्टा पढिसकेपछि २० मिनेट ब्रेक लिने
मस्तिष्कलाई कहिल्लै कन्ट्रोल गर्न नखोज्ने
चिया, सुपारीजस्ता कुराहरू नखाने
निरन्तर रूपमा नपढ्ने
रेडियसन भएका वस्तुलाई आफूभन्दा टाढै राख्ने
सुत्दा मोबाइल तथा वाईफाईको राउटर अफ गर्ने
पढ्दा ब्याक बोन सीधा राख्ने
अर्लाम प्रयोग नगर्ने ।